Blockchain समाचार जनवरी72018 - Blockchain समाचार
Blockchain समाचार जनवरी72018
मार्क Zuckerberg Bitcoin मा निर्भर decentralize फेसबुक मद्दत गर्न
प्रविधिलाई powering Bitcoin भविष्यमा फेसबुक सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ, मार्क Zuckerberg भने.
प्रतिबद्धता भाग भन्दा साइट समाधान गर्न मद्दत गर्न रूपमा 2018, यसको संस्थापक उहाँले एकदम त्यसैले केंद्रीकृत हुनुको यसलाई बन्द गर्न नयाँ प्रविधिको प्रयोग मा हेर्न बताए.
ती प्रविधिहरू एक Bitcoin छ, उसले भन्यो.
“हामी विश्वास किनभने यो मानिसहरूको हातमा थप शक्ति राख्दछ कि एक decentralizing शक्ति हुन सक्छ हामी एक धेरै प्रविधि मा पायो. (फेसबुक गरेको मिसन को पहिलो चार शब्द सधैं गरिएको छ “मान्छे शक्ति दिन”.) फिर्ता 1990 र 2000s मा, अधिकांश मानिसहरू विश्वास प्रविधि एक decentralizing शक्ति हुनेछ,” उहाँले लामो पोस्ट मा यस्तो लेखे.
“तर आज…धेरै मान्छे अब प्रविधि मात्र शक्ति centralizes भन्दा यो decentralizes विश्वास गर्छन्।”
“इन्क्रिप्सन र cryptocurrency जस्तै - - केंद्रीकृत प्रणाली बाट सत्ता र मानिसहरूको हातमा यो फिर्ता राख्नु भन्ने महत्त्वपूर्ण यस प्रति-रुझान हो. तर तिनीहरूले नियन्त्रण गर्न कठिन हुनुको जोखिम आउन. म गहिरो जाने र यी प्रविधिहरू को सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू अध्ययन गर्न इच्छुक छु, र कसरी सर्वश्रेष्ठ हाम्रो सेवाहरू तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न,” उसले लेख्यो.
बैंक इङ्गल्याण्ड को cryptocurrency सुरु गर्न कुनै योजना छ
इङ्गल्याण्ड को बैंक वित्तीय प्रणाली यसको प्रभाव बारे चिन्ता बीच यसको आफ्नै डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना ड्रप छ.
को युके गरेको केन्द्रीय बैंक FTAdviser भन्नुभयो यो छ कि “कुनै वर्तमान योजना” यसको आफ्नै cryptocurrency सुरु, तर विषय अनुसन्धान जारी हुनेछ.
को BOE यसलाई सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक खाता प्रयोग गर्न बन्द हुन सक्छ र लेनदेनको BOE डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा मा सार्न भनेर र सामान खरिद चिन्ता अधिक योजना ड्रप संकेत. को BOE cryptocurrency एउटा ठूलो कदम उधारो गर्न नगद बाहिर चलिरहेको व्यावसायिक बैंकहरू नेतृत्व सक्छ, कारण “कोलाहल” अर्थव्यवस्था मा, यो भने.
Leveraged Bitcoin ETF को सेकेन्ड गर्न प्रस्तावित
एशिया |. कोष प्रबन्धकहरू "leveraged" र "व्युत्क्रम" उठ्नेछ भनेर रकम निर्माण गर्न योजना छन् – वा गिरावट – दुई पटक रूपमा दिइएको दिन Bitcoin को मूल्य छिटो.
Direxion सम्पत्ति व्यवस्थापन LLC एशिया | यदि Intercontinental विनिमय इंक गरेको NYSE Arca मुद्रा मा यस्तो उत्पादनहरु सूची योजना. जमानत नियामकहरु को टाउको निहुराउनु दिन, यो हप्ता विनिमय द्वारा एक दाखिला अनुसार.
हालसम्म यस एशिया |. जमानत र विनिमय आयोग अस्वीकार वा सबै प्रस्ताव पकड धारण छ.
Overstock blockchain परियोजनाहरू र थप निधि जर्ज Soros देखि अमेरिकी प्राप्त $ 100M
Overstock.com बस वित्त मा सबै भन्दा ठूलो नाम को एक देखि परिवर्तन को एक hefty बाक्लो टुक्रा पायो, र सीईओ पैट्रिक Byrne यसलाई धेरै भन्छन् कम्पनीको blockchain काम निधि हुनेछ.
एक जमानत र विनिमय आयोग मा disclosed कम्पनी (सेकेन्ड) एक वारंट को होल्डरलाई किन्न यसको सही exercised थियो यो हप्ता फाइल $100 साझा को लाख मूल्य. को दाखिला यस निवेशक पहिचान गरे तापनि छैन, Byrne CoinDesk भन्नुभयो यो क्वान्टम फंड थियो, अरबपति जर्ज Soros व्यवस्थित.
Blockchain समाचार जनवरी 7, 2018
मारियो Draghi: Bitcoin विनियमन ECB जिम्मेवारी छैन
मारियो Draghi, presid ...
अघिल्लो पोस्ट:सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू 2017 यस गुप्त समुदाय मा
अर्को पोस्ट:को IČO बजारमा कसरी परिवर्तन हुनेछ 2018?